ရန်ကင်းမှာ စားလို့ကောင်းတဲ့ လမ်းဘေးစာလေးများ - ဒိုးမယျ
ရနျကငျးဆိုတာ အရငျကတညျးက နာမညျကွီးခဲ့တာပါ။ အစားအသောကျတှေ၊ သင်ျကွနျပှဲနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး အရမျး နာမညျကွီးပါတယျ ။ပြျောရှငျစရာ ကောငျးပွီး အစားအသောကျလညျး ပေါတဲ့ နယျမွတေဈခုပါ ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး သှားသှားလာလာ သှားမယျဆိုလညျး ထိုငျစရာဆိုငျလေးတှရှေိတဲ့ နရော တဈခုပါ။ နောကျပွီးတော့ ရနျကငျးရဲ့ ထူးခွားခကျြက ရှာပွီးစားတတျရငျ လမျးဘေးစာ ကောငျးကောငျးလေးတှေ ရှိတတျတာပါပဲ။ လမျးဘေးစာဆိုပမေဲ့ ဒီနရောမှာ တခွားစားကောငျးတဲ့ နရော လေးတှကေိုလညျး ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။
ရနျကငျးမှာ နသေူတိုငျး မျောလမွိုငျကို သိပါတယျ။ ကွားမှတျတိုငျနားမှာ ရှိပွီးတော့ အဓိကရောငျးတာကတော့ ရခိုငျစာလေးတှပေါပဲ။ နောကျပွီးဒီဆိုငျမှာ ထူးခွားတဲ့ အစားအသောကျကတော့ ဝကျသားတို့ ကွကျသားတို့ကို မုနျ့နှဈ ကပျကွျော ထားတာပါပဲ။ စားဖူးတဲ့ သူတှကေို မေးကွညျ့လိုကျပါ။ မစားဖူးရငျ သှားစားလိုကျပါ။
၂. ကြျောကြား မုနျ့ဟငျးခါး
ဟုတျပါတယျ စားလုံးပေါငျး မှားနတော မဟုတျပါဘူး။ တောငျကို ကြျောလှားနတေဲ့ ကြားတဈကောငျ ပုံကို ငှရှေငျးကောငျတာနောကျမှာ ဆှဲထားတာတှနေို့ငျပါတယျ။ ရနျကငျးရဲ့ အကွောငျးကိုပွောပွတော့မယျဆိုရငျ အခွကွေီးတဲ့ ကြျောကြား မုနျ့ဟငျးခါးကိုမထေ့ားလို့ မရပါဘူး။ အိုးကွီး အကွီးကွီး ထဲမှာ ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ မုနျ့ဟငျးခါး အရညျရယျ အကွျော ကွှပျကွှပျလေးတှကေတော့ တကယျကို ဆှဲဆောငျနိုငျလှနျးလှပါတယျ ။ စာရေးသူ မနကျတိုငျးစားတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဒီမုနျ့ဟငျးခါးပါဝငျပါတယျ။
၃. မိုးကောငျး အကွျောတဲ
မိုးကောငျးဘုရားရှကေ့အကွျောတဲကိုလညျး မွညျးစမျးကွညျ့ဖို့ ပွောပွလိုကျပါရစေ။ အခညျြရညျရဲ့ အရသာကွောငျ့ နောကျပွနျမလှညျ့ခငျြဘူး ဖွဈနမှောပါ။
၁၂ လုံးတနျးဘကျက ကားမှတျတိုငျ နောကျမှာ ညီအဈကို နှဈယောကျရောငျးတဲ့ ဖာလူဒါဆိုငျလညျး သငျ့ကိုရနျကငျးမှာ နခေငျြအောငျဆှဲဆောငျမှာပါ။
၅. ဦးလေးကွီး တုတျထိုး
ဖာလူဒါဆိုငျကနေ နညျးနညျးလေးထပျလြောကျတာနဲ့ အရမျးကောငျးတယျလို့ လူတိုငျးပွောကွတဲ့ တုတျထိုးဆိုငျလေးရှိပါတယျ။
ရနျကငျးစငျတာဘေးဘကျခွမျးက မာလာငါးကငျကလညျး ဘာနဲ့ စားစား တျောတျောလေး စားကောငျးပါတယျ။ဘီယာနဲ့ မွညျးမလား။ ထမငျးနဲ့ စားမလား ရှယျတနျပွီး ရှယျစားကောငျးပါတယျ။
ဘောကျထျောစြေးရဲ့ မကျြစောငျးထိုးနားမှာ ဦးလေးကွီးတဈယောကျ ဗိုကျပူပူနဲ့ အီကွာကှေးကွျောနတောမွငျရငျ ပွေးသာဝယျစားလိုကျပါ။ စာရေးသူတို့ ငယျငယျတညျးကစားလာတာပါ။ကဲ အခုလောကျဆိုရငျ ကားတဈစီးနဲ့ပတျစားရမဲ့ ကိနျးဆိုကျနလေောကျပါပွီ။
ခုလို အရသာရှိတဲ့ ဆိုငျကောငျးကောငျးလေးတှကေ အစားအသောကျတှကေို စားခငျြတယျဆိုရငျတော့ Doemal Application ကနေ မှာစားလို့ရနပွေီဆိုတာလေးလဲ တဈခါထဲပွောလိုကျပါရစနေျော။ ဆိုငျသှားစားပွီးရငျလညျး ကောငျးရငျ ပွနျလညျဝမြှေပေးကွပါဦး။ ကြေးဇူးတငျခွငျးမြားစှာဖွငျ့။
ရန်ကင်းဆိုတာ အရင်ကတည်းက နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။ အစားအသောက်တွေ၊ သင်္ကြန်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အရမ်း နာမည်ကြီးပါတယ် ။ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းပြီး အစားအသောက်လည်း ပေါတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုပါ ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး သွားသွားလာလာ သွားမယ်ဆိုလည်း ထိုင်စရာဆိုင်လေးတွေရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခုပါ။ နောက်ပြီးတော့ ရန်ကင်းရဲ့ ထူးခြားချက်က ရှာပြီးစားတတ်ရင် လမ်းဘေးစာ ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိတတ်တာပါပဲ။ လမ်းဘေးစာဆိုပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ တခြားစားကောင်းတဲ့ နေရာ လေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
ရန်ကင်းမှာ နေသူတိုင်း မော်လမြိုင်ကို သိပါတယ်။ ကြားမှတ်တိုင်နားမှာ ရှိပြီးတော့ အဓိကရောင်းတာကတော့ ရခိုင်စာလေးတွေပါပဲ။ နောက်ပြီးဒီဆိုင်မှာ ထူးခြားတဲ့ အစားအသောက်ကတော့ ဝက်သားတို့ ကြက်သားတို့ကို မုန့်နှစ် ကပ်ကြော် ထားတာပါပဲ။ စားဖူးတဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။ မစားဖူးရင် သွားစားလိုက်ပါ။
၂. ကျော်ကျား မုန့်ဟင်းခါး
ဟုတ်ပါတယ် စားလုံးပေါင်း မှားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်ကို ကျော်လွှားနေတဲ့ ကျားတစ်ကောင် ပုံကို ငွေရှင်းကောင်တာနောက်မှာ ဆွဲထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရန်ကင်းရဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြတော့မယ်ဆိုရင် အခြေကြီးတဲ့ ကျော်ကျား မုန့်ဟင်းခါးကိုမေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အိုးကြီး အကြီးကြီး ထဲမှာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး အရည်ရယ် အကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေးတွေကတော့ တကယ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းလှပါတယ် ။ စာရေးသူ မနက်တိုင်းစားတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဒီမုန့်ဟင်းခါးပါဝင်ပါတယ်။
၃. မိုးကောင်း အကြော်တဲ
မိုးကောင်းဘုရားရှေ့ကအကြော်တဲကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ပြောပြလိုက်ပါရစေ။ အချည်ရည်ရဲ့ အရသာကြောင့် နောက်ပြန်မလှည့်ချင်ဘူး ဖြစ်နေမှာပါ။
၁၂ လုံးတန်းဘက်က ကားမှတ်တိုင် နောက်မှာ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ရောင်းတဲ့ ဖာလူဒါဆိုင်လည်း သင့်ကိုရန်ကင်းမှာ နေချင်အောင်ဆွဲဆောင်မှာပါ။
၅. ဦးလေးကြီး တုတ်ထိုး
ဖာလူဒါဆိုင်ကနေ နည်းနည်းလေးထပ်လျောက်တာနဲ့ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ လူတိုင်းပြောကြတဲ့ တုတ်ထိုးဆိုင်လေးရှိပါတယ်။
ရန်ကင်းစင်တာဘေးဘက်ခြမ်းက မာလာငါးကင်ကလည်း ဘာနဲ့ စားစား တော်တော်လေး စားကောင်းပါတယ်။ဘီယာနဲ့ မြည်းမလား။ ထမင်းနဲ့ စားမလား ရှယ်တန်ပြီး ရှယ်စားကောင်းပါတယ်။
ဘောက်ထော်ဈေးရဲ့ မျက်စောင်းထိုးနားမှာ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် ဗိုက်ပူပူနဲ့ အီကြာကွေးကြော်နေတာမြင်ရင် ပြေးသာဝယ်စားလိုက်ပါ။ စာရေးသူတို့ ငယ်ငယ်တည်းကစားလာတာပါ။ကဲ အခုလောက်ဆိုရင် ကားတစ်စီးနဲ့ပတ်စားရမဲ့ ကိန်းဆိုက်နေလောက်ပါပြီ။
ခုလို အရသာရှိတဲ့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေက အစားအသောက်တွေကို စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Doemal Application ကနေ မှာစားလို့ရနေပြီဆိုတာလေးလဲ တစ်ခါထဲပြောလိုက်ပါရစေနော်။ ဆိုင်သွားစားပြီးရင်လည်း ကောင်းရင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးကြပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းများစွာဖြင့်။